‘हुर्काउनै मुस्किल चार अमूल्य उपहार’ - Namaste Times
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ०४, २०७६ समय: १३:२३:२२
गौरव प्रधानलाई एक सन्तानको चाहान थियो । यसअघि नै पाँच वर्षको छोरा भएकाले सकेसम्म एक छोरी भइदिए छोराछोरी दुवैको रहर पूरा हुने चाहाना स्वाभाविक पनि हो । सधैँ सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र ! श्रीमतीको रजस्वला रोकिएको ३७ दिनमा नै थाहा भयो गर्भमा तीन सन्तान छन् भन्ने कुरा ।
विगत पाँच वर्षदेखि दुबइमा रहनुभएका प्रधानलाई सन्तानको माया त हुने नै भयो । वैदेशिक रोजगार रहर नभइ बाध्यता थियो । पुतलीबजार नगरपालिका–१ का प्रधानले बुबाआमाको साथ श्रीमतीलाई छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा फर्कनुभयो । प्रत्येक महिनाको भिडियो एक्स रे को रिपोर्टमार्फत श्रीमतीको बारेमा जानकारी लिइरहनुभएका प्रधान २० दिनअघि मात्र नेपाल आउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारको सीमित आम्दानीबाट परिवारको पालनपोषण गर्दै आउनुभएका प्रधान दम्पत्तीलाई एकैचोटी जन्मिएका चार सन्तानको पालनपोषण थप समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै लागेको छ । तर, आशावादी छन् दम्पत्ती “यो भगवानको अमूल्य उपहार हो, हामी निकै खुशी छौं । तर, हुर्काउनै मुस्किल छ ।”
अहिले बच्चालाई सघन कक्षमा राखिएको छ । अस्पतालको खर्चको बारेमा पनि प्रधानले केही नसोचेको बताउनुभयो । “कति दिनसम्म राख्नुपर्ने हो खै ? कति खर्च लाग्ने हो केही थाहा छैन । अहिलेसम्म अस्पताल र डाक्टरहरुबाट उपचार सहुलियतको बारेमा केही जानकारी गराउनु भएको छैन ।”
भिडियो एक्सरेमा तीन वटा देखिएको तर गर्भमा चारवटा सन्तानको बारेमा डा महेन्द्रराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, “कतिपय अवस्थामा बच्चा खप्टेको हुन्छ, अंग नदेखिन सक्छ, देखिँदा तीन वटा मात्रै देखियो पछाडिपट्टी भएकाले नदेखिएको हुनसक्छ ।” उहाँले आठ लाख मानिसमध्ये एक महिलाले चार सन्तान जन्माउने गरेकोे बताउनुभयो । कृत्रिम गर्भाधानमा जुम्ल्याह, तिम्ल्याहा, चम्ल्यामा जन्मने देखिए पनि प्राकृतिक गर्भाधानमा भने यो दुर्लभ भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “गर्भाधानमा सामान्यतया एक शुक्रकिटको मिलन एउटासँग भएर त्यसपछि हुने विभाजनले गर्दा पनि हुनसक्छ अथवा एउटाभन्दा बढी शुक्रकिटको धेरै वटा अण्डासँग मेल भएर पनि जन्मने गदर्छ ।”